စိတ်ကူးပုံဖော်မှုများဖြင့် သက်ဝင်လှုပ်ရှားခဲ့တဲ့ Cosplay ပွဲတော်
မြန်မာလူငယ်များက နိုင်ငံတကာတွင် ခေတ်စားနေသောအရာများကို အမီလိုက်နိုင်ရန် ကြိုးစားနေကြသည်
၁၉၃၆ စပိန်နဲ့ ဒီကနေ့ မြန်မာနိုင်ငံကြား နှိုင်းယှဉ်လို့ မဖြစ်နိုင်တဲ့ အရာတွေ ရှိပါတယ်။ တစ်ခုက အနာဂါတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ သရုပ်မှန်ဝါဒ ဖြည့်သွင်းထားတဲ့ မျှော်လင့်ချက် ဖြစ်ပါတယ်။ ခင်ဇော်ဝင်း ရေးသားသည်။ မကြာသေးခင်က အွန်လိုင်းက နယူးယော့တိုင်းသတင်းစာရဲ့ အတွေးအမြင် အက်ဆေးတွေပေါ်က ရှုမြင်သုံးသပ်ချက် နှစ်ခုအကြောင်း စဉ်းစားနေမိပါတယ်။ တစ်ခုက ရီပတ်ဘလစ်ကင်.
သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကဏ္ဍ တိုးတက်လာစေရန် ရည်ရွယ်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်အရ ရန်ကုန်ရှိ အကြီးမားဆုံး ကွန်တိန်နာဆိပ်ကမ်း တစ်ခုအတွက် ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုအဖြစ် နိုင်ငံတကာ ငွေကြေးကော်ပိုရေးရှင်း(အိုင်အက်ဖ်စီ) က အမေရိကန်ဒေါ်လာ သန်း ၄၀ ထောက်ပံ့မည်ဟု ပြီးခဲ့သည့် ရက်သတ္တပတ်က သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ ကမ္ဘာ့ဘဏ်အုပ်စု၏ အဖွဲ့ဝင်တစ်ခုဖြစ်သော အိုင်အက်ဖ်စီ၏ ငွေကြေး ထောက်ပံ့မှုသည် နိုင်ငံ၏.
အဓိက မြန်မာ့လုပ်ငန်းရှင်အချို့အကြောင်း အပိုင်း ၂
မြန်မာနိုင်ငံ၏ စီးပွားရေးကဏ္ဍများတွင် ဝင်ရောက်နေရာယူနိုင်ခဲ့သည့် အဓိက ကုမ္ပဏီများ၏ လုပ်ငန်းရှင်သူဌေးအချို့အကြောင်း တစေ့တစောင်းကို ထပ်မံဖော်ပြအပ်ပါသည်။ ဂျာရတ် ဒေါင်းနင်း ရေးသား ပုံဖော်သည်။ width= ဦးအောင်ကိုဝင်း အသက် – မသိရသေး အဓိကစီးပွားရေး – ကမ္ဘောဇလုပ်ငန်းအုပ်စု KBZ ထင်ရှားသည့်လုပ်ငန်းများ- ဘဏ်လုပ်ငန်း၊ စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်း၊ လေကြောင်းလိုင်း၊.
လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဥပဒေ ချိုးဖောက်မှုဖြင့် ဦးဂမ္ဘီရအား ထောင်ဒဏ် ခြောက်လ ချမှတ်
၂၀၀၇ ရွှေဝါရာင်တော်လှန်ရေးကာလအတွင်းက ခေါင်းဆောင်တစ်ဦးဖြစ်သော ဘုန်းတော်ကြီးဟောင်းကို ဇန်နဝါရီ ၂၁ ရက်နေ့က မန္တလေးမြို့တွင် ဖမ်းဆီးခဲ့သည်
အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် အစိုးရသစ်ဟာ စာနယ်ဇင်းကောင်စီ ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ ဦးဖေမြင့်ကို ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးအဖြစ် ခန့်အပ်လိုက်ပါတယ်။ သူဟာ ဦးသိန်းစိန် တာဝန်ယူခဲ့တဲ့ မြန်မာပြည် ဒီမိုကရေစီ အသွင်ကူးပြောင်းရေး ကနဦးကာလအတွင်း မီဒီယာလောက ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးလုပ်ငန်းတွေမှာ အစိုးရနဲ့ အတိုက်အခံအဖြစ် ရပ်တည်ခဲ့သူတွေထဲက တစ်ဦးပါ။ ဒါကြောင့် ဦးဖေမြင့် ဝန်ကြီးအဖြစ် တာဝန်ယူချိန်မှာ.
ယခုနှစ်အစောပိုင်းက ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများတွင် အမြတ်ငွေကြီးမားစွာကျဆင်းသည့်တိုင် သြစတြေးလျရေနံနှင့် သဘာဝဓါတ်ငွေ့ ကုမ္ပဏီ Woodside Energy က မြန်မာဈေးကွက်တွင် တိုးတက်မှုများရှိလာမည်ဟု ယုံကြည်စွာမျှော်လင့်လျက်ရှိသည်ဟု ဧပြီ ၂၁ ရက်နေ့က ကုမ္ပဏီ၏ နှစ်ပတ်လည်အထွေထွေအစည်းအဝေးတွင် ဥက္ကဋ္ဌက ပြောကြားခဲ့သည်။ ကုမ္ပဏီ၏ စင်ကာပူဒေသခံ လက်အောက်ခံကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်သော Woodside Myanmar သည် ၎င်း၏.